HBO Max vs HBO Now - Iza no tsara indrindra amin'ny 2020? - Fialam-Boly
HBO Max vs HBO Now - Iza no tsara indrindra amin'ny 2020?
HBO dia malaza amin'ny atiny famandrihana manokana efa ho 50 taona izao, izao dia miasa fantsona fito 24 ora izay feno ny atiny avo lenta ary koa ny atiny manana fahazoan-dàlana. Ny orinasa dia nandray ny dingana voalohany tamin'ny vanim-potoana niomerika niaraka tamin'ny HBO Now dimy taona lasa ary noho izany dia nametraka ny fototry ny serivisy tsara kokoa antsoina hoe HBO Max.
HBO Max vs HBO Now - Topimaso
Ity serivisy ity dia ahitana ny tranomboky goavambe HBO misy ireo seho tany am-boalohany sy sarimihetsika misy atiny maro hafa avy amin'ny orinasa Warner Media izay azonao atao amin'ny serivisy famandrihana tokana. Fantatray fa tsy mora izany. Saingy, azonay antoka fa tsy ho hitanao ny ankamaroan'ireo seho sy sarimihetsika ireo any amin'ny toeran-kafa.
HBO Max dia serivisy mivantana. Manodidina ny $ 14,99 isam-bolana ny vidiny ary ao anatin'izany ny tolotra mahazatra HBO miaraka amina zavatra vaovao maro.HBO Max aza dia mamokatra seho sy sarimihetsika tany am-boalohany mitovy amin'ny Netflix, Amazon Prime Video ary koa Hulu.
Ireo olona izay nampiasa HBO Go na HBO Now teo aloha dia afaka miditra amin'ny HBO Max miaraka amin'ny antsipirian'ny kaonty misy azy ireo raha tsy misy vola fanampiny. Ny HBO Max dia toy ny fanavaozana maimaimpoana ary koa fanoloana ireo serivisy hafa.
Te hahafantatra izay tsara indrindra amin'ny Netflix & Prime Video? Taratasim-bola Netflix vs Amazon Prime Video Comparison.
Inona ny HBO Max?
HBO Max dia serivisy mivantana izay tsy mila famandrihana tariby ampiasaina. Izy io dia misy ny tolotra mahazatra an'ny HBO ary mety hitentina $ 14,99 isam-bolana ianao ary hahazo zavatra vaovao be dia be avy amin'ny fananana WarnerMedia, toy ny Cartoon Network, DC Comics, TNT, CNN, TBS.
Ity serivisy ity dia natomboka tany Etazonia tamin'ny volana Mey 2020 lasa teo, nanolo ireo serivisy fitaterana tranainy roa an'ny orinasa izay fantatra amin'ny anarana hoe HBO Go sy HBO Now. Tsy misy intsony ny HBO Go ary lasa HBO Now ny app HBO default amin'ny fitaovana vitsivitsy voafantina.Na ny HBO Max dia mamokatra seho sy horonan-tsary tany am-boalohany, toy ny sehatra streaming vitsivitsy hafa toa an'i Hulu, Netflix, ary Amazon Prime Video.
Ny serivisy dia nandefa sarimihetsika maherin'ny 1.300. Ka, raha fintinina, izay efa nampiasa HBO Go na HBO Now dia afaka miditra amin'ny HBO Max miaraka amin'ny kaonty misy azy ireo izao nefa tsy andoavany vidiny. HBO Max dia atolotra ho fanavaozana maimaimpoana ary koa fanoloana ny serivisy taloha.
Inona ny HBO izao?
HBO IZAO dia fantatra amin'ny maha mpandimby ny HBO Go. HBO Now dia nanala ny filàna famandrihana tariby.Betsaka ny olona no manontany tena hoe inona ny tena fahasamihafana misy eo amin'ny HBO Go sy HBO Now. Eny, ny tena maha samy hafa ny HBO Go sy ny HBO Now dia tsy nazava mihitsy.
Raha vao sambany natomboka ny HBO Now dia nitovy tamin'ny HBO Go izany - ny hany zavatra dia tsy nitaky famandrihana tariby ianao, na dia nanana famandrihana tariby aza ianao dia hanome anao fidirana amin'ny fampiharana. Izy io dia nanana ny atiny rehetra, ny fiasa ary ny fahaizan'ny streaming toy ny HBO Go.
Midira ho an'ny fihenan'ny mpianatra HBO Ankehitriny
Inona no mampiavaka ny HBO Max amin'ny HBO ankehitriny?
HBO Max sy HBO Ankehitriny dia manana ny vidiny mitovy. HBO Now dia mpanome tolotra streaming efa antitra kokoa izay miaraka amin'ny seho am-boalohany HBO.HBO Max dia manana ny atiny HBO Now rehetra ary miaraka amin'ny zavatra vaovao maro koa amin'ny vidiny mitovy.Raha misy aminareo nisoratra anarana tamin'ny HBO Now dia ho afaka hijery HBO Max miaraka amin'ny kaontinao efa misy.
HBO Max dia fantatra ho fanavaozana ny HBO Now.HBO Now no serivisy streaming taloha izay manana ny seho voalohany HBO.HBO Max sy HBO Now dia mitovy ny atiny.
HBO Max amin'ny ankapobeny dia manome ny atiny HBO Now miaraka amina zavatra vaovao maro be avy amin'ny marika WarnerMedia amin'ny $ 14.99 isam-bolana mitovy. Satria ny HBO Max dia manome ny mpampiasa azy tsara kokoa ary koa famakiam-boky lehibe kokoa noho ny HBO Now, dia marina tokoa fa ny HBO Max no safidy tsara indrindra ho an'ireo mpizara.
Ny fampiharana HBO Max dia tsy misy amin'izao fotoana izao amin'ny fitaovana malaza vitsivitsy izay misy ny vokatra Roku sy Fire TV.Raha ny marina dia ny HBO Max no safidy tsara kokoa ho an'ireo mpizara rehetra satria manana safidy malalaka kokoa sy atiny vaovao be dia be izy.
Drafitra sy vidiny:
Ohatrinona ny HBO Now isam-bolana?
HBO dia manolotra fe-potoana fitsapana hafitoana ho an'ireo mpampiasa. Rehefa tapitra ny fotoam-pitsarana dia manodidina ny $ 14,99 isam-bolana.
Ohatrinona ny HBO Max isam-bolana?
Izy io dia mitovy amin'ny HBO Now, ny HBO Max dia manana andrana maimaimpoana mandritra ny fito andro, avy eo rehefa vita ny fitsarana dia $ 14,99 isam-bolana.
Iza no misy sary mihetsika tsara indrindra?
HBO Now sy HBO Max dia samy manana ny atiny HBO izay ahitana seho malaza be toa an'i Euphoria, Game of Thrones, Last Week Tonight, ary Watchmen.
HBO Max dia manana tranomboky tsara lavitra sy goavambe. Miaraka amin'ireo atiny mitovy amin'izany amin'ny an'ny HBO Now dia ho azonao atao koa ny mahazo zavatra vaovao vitsivitsy. HBO Max dia manolotra seho tany am-boalohany toy ny Love Life, Craftopia, On the Record, ary Legendary.
Misy ihany koa ny atin'ny Warner Media toa an'i Pretty Little Liars, Rick sy Morty, Friends, ary ny andiany Harry Potter feno. Izy io aza dia manana katalaogy feno avy amin'ny tambajotra sy studio toa ny Cartoon Network, CNN, Warner Bros., TNT, New Line Cinema, TBS, Studio Ghibli, The CW, Crunchyroll, ary ny Swim olon-dehibe.
HBO Max dia mety ho safidy tsara kokoa ho anao na oviana na oviana satria mitovy amin'ny HBO Now ny vidiny ary mitovy ny ao anatiny, ny fiasa ary koa ireo zavatra vaovao vitsivitsy izay hitanao ao amin'ny HBO Max. Amin'izany dia ho azonao ny zavatra rehetra atolotry ny HBO Now amin'ireo mpampiasa azy ary misy ny zava-drehetra nataon'i HBO Go hatrizay - ary koa ny atiny am-boalohany sy tranomboky lehibe kokoa. Raha efa mpividy HBO Now na HBO Go ianao dia afaka mampiasa HBO Max tsy misy sarany fanampiny. Na izany aza, vitsy ny fitaovana tsy manohana ny HBO Max. Azonao atao ny mitsidika ny tranonkalany ofisialy ary hahitana raha manohana ny fitaovanao.
Ny fandosiran'i Hiro amin'ny Steam, rahoviana no havoaka, ary afaka milalao miaraka ny olona roa?
Torohevitra 21 sy tetikady AirPods Pro Tokony ho Fantatrao
ny fomba fampidinana sarimihetsika amin'ny netflix amin'ny mac
milalao io lalao tsy voasakana io any am-pianarana
tranokala mivantana mivantana mivantana tsy misy fisoratana anarana
misintona hira avy amin'ny youtube ka hatramin'ny mp3 maimaim-poana
fomba fanaovana lobaka fanao amin'ny roblox
tranokala misy sarimihetsika vaovao maimaim-poana hijerena an-tserasera